Ameerikaan biyyoonni addunyaa hariiroo Kooriyaa Kaabaa waliin qaban akka dhaaban gaafatte
Saturday, 30 December 2017 06:51
Finfinnee, Sadaasa 21, 2010 Ameerikaan biyyoonni addunyaa hariiroo ‘dippilomaasii’ fi daldalaa Kooriyaa Kaabaa waliin qaban akka addaan kutan gaafatte.
Waashingtan kana kan dubbatte Piyoongiyaang kaleessaa yaalii misaa’ela ‘baalaastikaa’ ardii ce’u fageenya dheeraa taasisuusheen wal-qabateetti.
Dhaabbata Mootummootaatti Ambaasaaddarri Ameerikaa Niikii Halee Walga’ii Mana-maree Nageenyaa irratti akka dubbatanitti ‘Pireezdaant’ Doonaald Tiraamp Chaayinaan boba’aa Piyoongiyaangii dhiheessitu akka addaan kuttu gaafataniiru.
Ameerikaan walitti-bu’iinsi akka uumamu akka hin-barbaanne kan himan ambaasaaddarittiin, waraanni yoo ka’e garuu bulchiinsa Kooriyaa Kaabaa guutumaan guutuutti akka balleessitu ibsaniiru.
Niikii Halee akkeekkachiisa kana kan dubbatan Kooriyaa Kaabaa callisuu baatii lamaa booda yaalii misaa’elaa jalqabaa taasisuusheen wal-qabateeti.
Kooriyaa Kaabaa gamasheetiin yaaliin misaa’elaa ‘baalaastiik’ kaleessa halkan taasifte ol-ka’iinsa kiiloo meetira 4,475 irratti furguggifamuu kan danda’u yoo ta’u, kunis ol ka’iinsa Wiirtuun Qorannoo Hawaa Idil-addunyaa irra jiru irraa dachaa 10 akka fagaatu beeksifteetti.
Misaa’elli ‘baalaastikii’ amma yaalte kun kanneen duraarra kan caalu ta’uu dureen biyyattii Kim Joong Un himaniru.
Madda: BBC (FBC)
Singaapoor A.L.A bara 2022 irraa jalqabee ‘baasiiwwan’ konkolaachisaa malee socho’an fayyadamuufi
Thursday, 23 November 2017 07:39
Finfinnee, Sadaasa 14, 2010 Singaapoor ‘baasiiwwan’ konkolaachisaa malee socho’an biyyaattii keessatti daandiiwwan irratti A.L.A 2022 hojii jalqabsiisuuf karoora akka qabdu beeksifte.
Mootummaan akka jedhetti ‘baasonni’ kunniin daandiiwwan dhiphina ‘tiraafikaa’ hin-qabne ‘diizayiniin’ isaanii baasota kanneenniif akka ta’u ta’ee qophaa’e naannoowwan haaraa sadii keessatti argamanitti yaaliif tajaajila irra oolu.
‘Baasonni’ kunniin jiraattotta bakkaa bakkatti deddeebisuuf faayidaarra oolu.
Uummata hedduu kan qabdu Singaapoor ‘teeknoolojiin’ konkolaachisaa hin-barbaanne kun rakkoo dhiphina lafaa fi hanqina humna namaa biyyattii keessaa too’achuuf akka ishee gargaaru abdii qabdu ibsiteetti.
“Konkolaattonni ofiin danda’anii socho’an kunniin sirna geejiba uummataa biyyaattii caalaa uummata bira akka qaqqabu gochuu fi waliin ga’uuf keessumaa maanguddoota, maatiiwwan, fi ijoollee biraan ga’uuf gargaara” Ministirri Geejibaa Kahaw Boon Wan akka jedhanitti.
‘Baasiiwwan’ haaraa of danda’anii konkolaachisaa malee socho’an kunniin tajaajila ‘baasii’ namaan socho’anii deggaruun tajaajila kennu jedhameera.
Singaapoor magaalota Kibba-Bahaa Ezhiyaa keessa jiran waliin wal-bira wayita qabamtu sababa immaata geejiba uummaataa jajjabeessu qabduu fi kaffaaltii daandii kaffalchiiftuuf dhiphina tiraafikaa xiqqoo qabdi.
Biyyattiin teknoolojii konkolaataa konkolaachisaa malee socho’uunis adda-duree ta’uuf abdii qabdi.
Yoo xinnaate ‘kaampaanonni’ 10 teeknoolojii konkolaataa konkolaachisaa malee socho’uu kana biyyattii keessatti yaalaa akka jiran ibsameera.
Emarsan Mingaagiwaa Jimaata iftaanii bakka ‘pireezdaatummaatti’ muudamu
Wednesday, 22 November 2017 07:13
Finfinnee, Sadaasa 13, 2010 Emarsan Mingaagiwaa iftaan gaafa Jimaataa ‘pireezdaantii’ Zimbaabuwee akka ta’aniif akka mudaman himame.
Dubbi-himaan ‘Paartii’ biyyattii bulchaa jiruu- ‘Zanu FP’ akka jedhanitti mingaagiwaan umurii waggaa 71 yeroo aangoo ‘pireezdaatummaa’ Roobart Mugaabee hafetti ‘pireezdaantii’ biyyattii ta’uun tajaajilu.
Buufati ‘televizhinii’ biyyaalessaa biyyattii waadaan ‘pireezdaantummaa’ iftaan gaafa Jimaataa akka geggeffamu ibseera.
Waggaa dhufu baatii Fulbaanaa irratti filannoon hanga geggeeffamuttis biyyattii ‘pireezdaantummaan’ hogganaa turu jedhameera.
Qabsaa’aa bilisummaa duraanii fi hundeessaa Zimbaabuwee haaraa kan ta’an Roobart Mugaabeen guyyaa kaleessaa aangoo gadhiisuunsaanii kan yaadatamudha.
Mugaabeen torban lamaan darbe Mingaagiwaa aangoo itti-aanaa ‘pireezdaantii’ irraa kaasuunsaanii kan yaadatamudha.
Mingaagiwaan torbanoota lamaan darbaniif Afriikaa Kibbaa keessa kan turan yoo ta’u, guyyaa har’aas gara biyyaatti nideebi’u jedhamee eegama.
Lammileen biyyattii hedduu Roobart Mugaabeen aangoo gadhiisuusaaniif gammachuu isaanii ibsanis, duree haaraa kanaan biyyattiitti jijjiiramni dhufaa laata kan jedhu garuu ammaas gaaffii isaaniiti.
Waraanni biyyattii Roobii darbee jalqabee aangoo mootummaa too’atee jira.
Roobart Mugaabee aangoo fedhii mataa isaaniin gadhiisan
Tuesday, 21 November 2017 07:09
Finfinnee, Sadaasa 12, 2010 (FBC) Pireezdaantiin Zumbaabuwee Roobart Mugaabee aangoo isaanii fedhii mataa isaaniin gadhiisuusaanii Af-yaa’iin paarlaamaa biyyattii jaakoob mundeenaa himaniru.
Mugaabeen ergaa barreessaniin murtoo kana fedhii isaanii fi ce’umsi aangoo nagaa akka jiraatuuf kan kan murteessan ta’uu himaniiru.
Murtoon Roobart Mugaabee dinqisiisaa kun adeemsa himati irratti banamee aangoorraa akka ka’aniif itti-adeemamaa ture akka dhaabbatu godheera.
Mugaabeen fedhiin aangoo gadhiisuu isaaniin wal-qabatees lammileen Zumbaabuwee daandiitti ba’anii gammachuusaanii ibsaa jiru.
Back Naayjeeriyaattii Boombiin Lubbuu namoota 10 Galaafate.
Thursday, 16 November 2017 05:05
[Oromiapo 07 03 2010]:-Naayjeeriyaa, magaalaa Maayduuguuritti boombiin namoota afuriin kiyyeeffamee dhookahee lubbuu isaanii dhabanii, lubbuu namoota nagaa 10 galaafachuun ,namoonni hedduu tahanis akka madeessan himeera.
Balaan mudatee kunis wayita kadhannaa(solaataa) irra turanidha lubbuun namoota torbaa akka darbee Aanga'oonni Beelloo Daambaattaa kan himan.
Balaan biroos kan mudatee mana keessatti dha, garuu kaayyoo isaanii osoo hin milkeessin lubbuu baleesittoonni lama kan boombichaan du'anii jedhameera.
Akka poolisiin jedheetti lubbuu balleesitoota boombiin irratti kiyyeeffamee keessaa kan aanaa Munaatti dhohee koriyaan ishee dubarti dha.
Balaa mudatee kanaaf gareen itti gaafatamumaa fudhatee hin jiru jedhameera. Haatahuuti gareen Bokoo Haaraam Maayduguritti balaa gara garaa uumuuf akka karoorfatee beeksise ture.
Gareen shoroorkeessaa Boko Haraam mootuummaa Islaamummaan hogganamuu hundeessuuf bara 2009 A.L.E. erga hundaa'ee as lubbuu namoota kumaatamaan lakkaawwaman yoo galaafatuu, kan miliyoonaan lakkaawwaman ammo qe'eesaanirraa baqachiseera.Maddi:-(OBN) BBC
Torbe Kana 51633
Ji'a Kana 91874
01/05/07 irraa eggalee 8191029
Kan Amma Daawwachaa Jiran 68